Global Voices teny Malagasy » Hitsidika An’i Pero, Arzantina ary Shily Ny Hazakazaka Dakar 2013 · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 29 Novambra 2012 11:56 GMT 1	 · Mpanoratra Laura Schneider Nandika (en) i Laura Schneider, avylavitra
Sokajy: Amerika Latina, Arzantina, Però, Shily, Fanatanjahantena, Mediam-bahoaka
Natolotra tao amin'ny Pavillon Gabriela tao Parisy, Frantsa ny andiany 2013 amin'ny Dakar Rally  (fifaninanana mamily) ny 21 Novambra 2012. Handia firenena Amrikana Tatsimo telo ity fifaninana ity, manomboka ny 5 Janoary ao Lima, Pero, mandalo an'i Arzantna amin'ny 13 Janoary, ary tonga ao Santiago, Shily ny 20 Janoary 2013.
Ny tranonkalam-baovao Arzantina Télam  [es] dia manoratra mikasika ireo sokajy samihafa ao anatin'ity andiany vaovao ity :
[Ilay fifaininanana dia] hisy dingana 14, ireo sokajin'ny fiara dia hanao 8574 km (4419 km mitohy sy 4155 km adim-pamantaranandro); ny sokajy ‘moto’ hanao 8423 km (4277 km mitohy sy 4146 km adim-pamantaranandro) ary ireo sokajy fiarabe dia hanao 8121 km (4580 km mitohy sy 3541 km adim-pamantaranandro).
Dakar 2012 – sary: Laura Schneider
Ny tranonkala ofisialy  dia mitondra fanamarihana mikasika ny endriky  ny làlana any amin'ny firenena tsirairay ary mizara sarintany iray mikasika ilay hazakazaka familiana :
Pero, ampahany II
Nangorintsina ny olona izay sambany nahita an'i Pero tamin'ity dingan'ny 2012 ity. Amin'ity indray mitoraka ity, ireo mpifaninana rehetra, mpamily sy mpanara-dia dia ho afaka hitsapa ny fahasahian-dry zareo aminà sehatra goavana be feno dongom-pasika hita nanerana ny kaontinanta hatramin'ny 2009. Tsy mbola nisy mihitsy hatrizay izany Dakar nanomboka avy any anaty tany efitra izany teo amin'ny tantarany. Raha ny fandanjalanjana ny fahasarotana no hanapaka ny hoe rahoviana no miakatra ny tsindry, dia tsy hanan-toerana mihitsy ny kisendrasendra sy ny kitsapatsapa amin'ny 2013.
Arzantina sy ireo endriny maro.
Vantany vao avy mandalo ny andian-tendrombohitra Andes izy ity, aorian'ny fitsidihany voalohany an'i Shily, dia hahita endrika hafa amin'i Amerika Atsimo ny hazakazaka : ny iray izay miantoka karazan-kianja isan-karazany izay misokatra amin'ny fahaizana mamolaka mora foana. Ao Arzantina, ny fahaizana mampiasa ny tontolo manodidina dia zava-dehibe, miala avy amin'ny fitaingenana soavaly vy mankany amin'ny fitaingenana fiara ary amin'ny fisafidianana ireo karazam-pomba fanao hitantanana ny hazakazaka. Na dia tsy dia ho betsaka loatra ara-patra aza ny fasika, ny fitsidihana ny firenen'ny Gaucho na izany aza dia hifarana aminà sedra goavana izay ny tena manampahaizana amin'ny familiana any an-tany efitra ihany no hahazo aina.
Shily, fatra avo roa heny sy tena antoky ny aina
Ampahany roa miavaka no holalaovina ao Shily ary tena tsy misy azo hamaivanina na iray aza amin'izy ireny. Ny fiverenana ho any Atacama dia mitovy amin'ny ampahany amin'i Dakar izay hisedran'ireo mpifaninana ny tena henjana amin'ny resaka lazon'ady. Ho toy ny fanamby amin'ny fiaretana farany, ny ampahany anaty dongom-pasika dia hitohy hatramin'ny andro mialoha ny farany. Alohan'ny hahatongavana ao Santiago, mila mahafehy ny fahasarotana rehetra ireo mpifaninana mba hahatongavana hatramin'ny farany.
Kanefa, i Alex Sender ao anatin'ny bilaoginy Astroufo  [es] dia manoratra mikasika ny ahiahiny momba ny geoglyphs  (vato mifanongoa manome endri-javatra) any amin'ny iray amin'ireo ampahanà fifaninanana atao any Pero:
Ireo tany efitra sy lemaka ao amin'ny departemantan Ica (Peru) dia azo heverina ho ny faritra be geoglyph be indrindra eto ambonin'ny tany. [Ny Geoglyphs] dia kisarisary natao amin'ny tany izay mahavita miaritra ny fandalovanà taonjato maro. Ohatra, misy ireo tsipika malaza antsoina hoe “Nazca Lines”, ny kisarin'i Palpa, ireo geoglyphs ao Ocucaje, ary ny Paracas Candelabra. Saingy tsy ireo no hany geoglyphs azontsika jerena any amin'ny faritra; any anatin'ny tany efitr'i Paracas misy andianà kisarisary tsy dia be mpahalala loatra antsoina hoe Paracas geoglyphs  [es].
Ao amin'io bilaogy io ihany, nampitandrina  i Alex [es] mikasika ny loza fahavoazana mety hiseho nandritra ny Dakar 2012:
Avy amin'ny alalàn'ity tranonkala kely tsy dia manao ahoana ity, mangataka ny manampahefana sy ny vahoaka amin'ny ankapobeny aho mba hirotsaka an-tsehatra amin'ny fiarovana ireo lova sarobidy navelan'ny razambentsika, lova iray izay tsy ho an'i Pero irery fa ho an'izao tontolo izao. Ndeha tsy homentsika làlana ny fanimbàna ireo zavatra izay niharitra ny fotoana nifandimby, nampita hafatra manan-tantara, ary ndeha hotehirizintsika ny tany efitra, izay azo antoka fa mbola mitahiry zava-mahagaga maro hafa miafina.
Hazakazaka Dakar 2012- sary : Laura Schneider
Nandritra ny dimy taona nifanesy, ny Fikambanana Dakar dia nisafidy ny faritra Amerika Atsimo ho ao anatin'ny fifaninanany izay mahasarika mpizahatany an'arivony. Ny Dakar dia miteraka hetsika ara-toekarena manome tombony ny faritra, mampahafantatra amin'izao tontolo izao ny zava-mahagaga natoraly atolotr'ireo firenena telo mampiantrano.
Azonao arahana eo ambanin'ny tenifototra #Dakar2013  ireo bitsika mifandraika amin'izany. Cesar Ruiz Arana (@CesarRuizArana)  [es], ohatra, manoratra hoe :
@CesarRuizArana:  efa eto sahady ny #Dakar2013  … adrenaline sy fientanentanana ho an'ireo tena mpankafy!
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2012/11/29/42119/
 tranonkala ofisialy: http://www.dakar.com/dakar/2013/us/index.html